ဘာကြောင့်ကြော်ငြာရတာလဲ။ | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာRayHaber | မီးရထားအဝေးပြေးလေကြောင်းလိုင်းအဝေးပြေးသတင်းနှင့်လေလံအဘယ်ကြောင့်သင် Advertise သလဲ?
ထိုကဲ့သို့သောအစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောကဏ္ဍတွင်သတင်းစာပညာ၏ဥာဏ်လမ်းညွန်ပေးစေခြင်းငှါ özenrayမီဒီယာ အဖြစ်, ရောင်ခြည်သတင်းများကျနော်တို့တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ÖzenRayမီးရထားလီမိတက်မှစီမံသည် RayHaberRaillyNews၊ TeleferikNews နှင့် HighwayNews တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
သငျသညျ cable ကိုကားများနှင့်လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကအကြောင်းကိုသတင်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်လက်ရှိရထားလမ်းစနစ်များ, www ။rayhaber.com, စမ်းသပ်ခြင်း 23.11.2011 အတွက်ထုတ်လွှင့်, တရားဝင်ထုတ်ဝေ 01.01.2012 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ သင်ကနိုင်ငံတကာနယ်ပယ်တွင်အပေါငျးတို့သသတင်းလိုကျလြှောကျနိုငျအမျိုးသားရထားလမ်းစနစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်ကနေ့စဉ်နှင့်လက်ရှိတင်ဒါများနှင့်ရလဒ်များကိုနောက်လိုက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကသတင်း, မြေပုံများဗီဒီယိုနှင့်ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်နဲ့အတူသန့်စင်အကြောင်းအရာနှင့်သင်၏ဝန်ဆောင်မှုမှာရှိပါတယ်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site ပေါ်တွင်ပြည်နယ်များနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းအရသိရသည်ခွဲခွဲခြားငျတှေ့နိုငျပါသညျ! ကျွန်ုပ်တို့၏ site တစျထောငျ 60 25 စုစုပေါင်းနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများနှင့်နီးစပ်သောပါရှိသည်အခြားသတင်းအရင်းအမြစ်များကိုထက်အများကြီးချမ်းသာဖြစ်ပါသည်, အခမဲ့နေ့စဉ်သတင်းလွှာနှင့်အတူထက်ပို3တထောင်ရထားလမ်းလုပ်သားများထံသို့စေလွှတ်သည်။ ဒါ့အပြင် RSS ကိုအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှ 10 တထောင်တဲ့ subscribers အတိုင်းလိုက်နာတဲ့သူများစွာသောလူ, အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်။
Spaylaşımကိုလည်းလူမှုရေးကွန်ယက်နှင့်အတူထောက်ခံ RAYHABERတစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းနေ့ကသင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအသိအမှတ်ပြုမှုကိုတိုးပွားစေသဖြင့်, ကြည့်ရှုမှုတိုးပွားလာနေသည်။
Facebook က: Rayhaber စာမျက်နှာ 12K RayHaber အုပ်စုတစ်စု 5K
Instagram ကို: RayHaber 4K
LinkedIn တို့: RayHaber 30K
ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရကမ္ဘာ့ပထမ 150.000 ဆိုက် အတွက်တူရကီရဲ့ site ကိုပထမဦးဆုံး 2.000 အတွင်းတည်ရှိသည် RayHaber ဆက်လက်မြင့်တက်နေသည်။ ပထမဦးဆုံးကမ်ဘာပျေါတှငျကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် 100.000 တူရကီအတွင်းပထမဆုံး 1.000 က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက် @ ကိုဆက်သွယ်ပါ။rayhaber.com နှင့်အယ်ဒီတာ @rayhaber.com လိပ်စာများ။
ခိုင်ခံ့သောတိုက်ခိုက်ကြော်ငြာများမှစုစုပေါင်း Quartz မော်တော်ဆီ '' 03 / 04 / 2014 စုစုပေါင်းလင်းကျောက်မော်တာဆီ '' အစွမ်းထက်ကြော်ငြာတိုက်ခိုက်မှု:5။ TOTAL QUARTZ အင်ဂျင်သည်ချောဆီအရည်အချင်းရှိကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူအများစုကအတည်ပြုသည့်အဓိကစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဖိနှိပ်မှုစာရွက်အဖြစ်ပုံမှန်အတိုင်းပုံနှိပ်ကြော်ငြာပစ္စည်းအလုပ် 14 / 03 / 2014 TCDD ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနအထွေထွေညွှန်ကြားမှုလက်ကမ်းစာစောင်များကိုပုံမှန်ကြော်ငြာပစ္စည်းအဖြစ်ပုံနှိပ်ခြင်းတင်ဒါတင်သွင်းမှုနှင့်အကြောင်းအရာများအဆိုပြုလွှာတင်သွင်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဆောင်းပါး 1 - စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် 1.1 ။ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်၊
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အလုပ်စုဝေး disassembly ၏ကြော်ငြာကိစ္စ္စ၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်မှ Wagon သတ္တုပါး (YHT, EMU, DMU သမားရိုးကျလှည်းတွေနဲ့သတ်မှတ်) 14 / 03 / 2014 တူရကီနိုင်ငံမီးရထားလမ်း၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု (TCDD) wagon မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်သတ္တုပါးကြော်ငြာအရောင်တင်ခြင်းများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းတင်သွင်းမှုနှင့်ကိစ္စရပ်များအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ဆောင်းပါး 1 - ပိုင်ရှင်၏အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် 1.1 ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ပုံနှိပ်နှင့်ပိုစတာဆွဲထားဖို့ Advertising ကြော်ငြာရာအရပျ 14 / 03 / 2014 တူရကီနိုင်ငံမီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) ကြော်ငြာပိုစတာများကိုပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆွဲထားခြင်းတင်ဒါတင်သွင်းမှုနှင့်အကြောင်းအရာများအဆိုပြုလွှာတင်သွင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဆောင်းပါး 1- စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် 1.1 ။ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေး၊ တစ်ဦး) ...
Sanliurfa, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်3။ Advertising ကြော်ငြာပိုစတာတံတားမူရင်း (ဗီဒီယို) 18 / 03 / 2014 Sanliurfa, Istanbul ရှိ3။ တံတား၏ကြော်ငြာပိုစတာကိုကြိုးဆွဲချခဲ့သည် - ၀ န်ကြီးချုပ် Recep Tayyip Erdoğanသည်9မတ်လကဆန်လီယာဖာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောဆန္ဒပြပွဲတွင် Istanbul သို့3တံတားနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားကိုသတင်းကောင်းပေးခဲ့သည်။ ၀ န်ကြီးချုပ် Recep Tayyip Erdogan's
တတိယတံတား Advertising ကြော်ငြာရုပ်ရှင်ပွဲတော် Published
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (333) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (582) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)